Liverpool Oo Dhamaystiraysa Heshiiska Badalka Dejan Lovern Iyo Xog Cusub Oo Ka Soo Baxday. - Gool24.Net
Liverpool Oo Dhamaystiraysa Heshiiska Badalka Dejan Lovern Iyo Xog Cusub Oo Ka Soo Baxday.
August 4, 2020 Mahamoud Batalaale
Kooxda Liverpool ayaa qarka u saaran in ay dhamaystirto difaaca kooxda Real Betis ee Aissa Mandi kaas oo uu Jurgen Klopp doonayo in uu u buuxiyo booskii uu ka baxay Dejan Lovern.
Maalmihii ugu danbeeyay ee bishii July waxay Liverpool dalab ka gudbisay difaaca kooxda Real Betis ee Aissa Mandi laakiin hadda waxaa ka soo baxay war cusub oo farxad u ah jamaahiirta Reds.
Kanaalka beIN SPORTS ayaa shaaciyay in xidiga carbeed ee Aissa Mandi uu hadda qarka u saaran yahay in uu noqdo ciyaartoy Liverpool ah isla markaana ay heshiiskiisa uu Anfield ku imanayo ka hadhsan tahay kaliya dhamaystirka faah faahinta qodobada heshiiska la saxiixayo.
Liverpool ayaa sababo gaar ah u doonaysa saxiixa Aissa Mandi waxaana ugu horaysa tayada ciyaareed ee uu leeyahay, awooda uu laba boos kaga ciyaari karo iyo waliba qiimaha lama filaanka ah ee lagu heli karo maadaama oo uu galay sanadkii qandaraaskiisa ugu danbeeyay.
Liverpool ayaa kooxda Zenit St Petersburg waxay £10.9 milyan gini kaga iibisay Dejan Lovern laakiin Reds ayaa doonaysa in ay isla markiiba lacagtan ku kharash garayso difaac dhexe oo badal u noqon kara Lovern kaas oo hadda noqonaya Aissa Mandi waxayna Reds xidigan kula soo wareegaysaa 9 milyan gini oo kaliya.
Aissa Mandi oo 28 sano jir ah ayayna kooxda Real Betis doonayn in ay heshiis cusub ka saxiixato laakiin Liverpool ayaa doonaysa in ay ka faa’iidaysato in Mandi uu galay dhamaadka heshiiskiisa kooxdan si ay qiimihii Lovern ay ku iibisay in ka yar ugu soo maal gashan karto.
Jurgen Klopp waxa uu jecel yahay ciyaartoyda awooda u leh in ay hal boos ka badan ka ciyaari karaan sida Fabinho, Henderson, Milner, Firmino, Salah iyo Mane waxayna u noqon kartaa in Aissa Mandi uu ka caawin karo in uu difaaca midig iyo difaaca dhexe hadaba ka uu uga baahdo ka ciyaar siin karo.
Xidiga reer Algeria ee Aissa Mandi ayaa noqon kara saxiixa ugu horeeya ee ay Liverpool suuqa xagaagan ka samayn karto maadaama oo warka hadda soo baxay sheegayo in Reds ay qarka u saaran tahay dhamaystirka heshiiska uu Aissa Mandi ugu soo wareegayo Anfield.
Si kastaba ha ahaatee, heshiiska Aissa Mandi ee Real Betis ayaa lagu burburin karaa 30 milyan balse rabitaanka xidigan ee in uu Liverpool ku soo biiro iyo in uu galay 12 kii bilood ee heshiiskiisa ugu danbeeyay ayaa Reds ka caawinaysa in ay 9 milyan kaliya ku hesho.
Ma ahan player kaso bixi karo shaqo koox sidan u wayn ee wa miguera oo kale
Aad ban ugu faraxsanahay in daafac adag oo boosas badan ka ciyaara in ay lasoo wareegto kooxdeyda reds